Maxaad ka taqaannaa dadka ka dambeeya isbadalka ka dhacay Suudaan? - BBC News Somali
Dalka Suudaan waxaa ka dhacay isbadal wayn oo ka dhashay mudaaharaadyo waawayn oo dalkaas gilgilay.
Arrintaas ayaana horseeday in milatarigu ay go'aansadaan in ay xilka ka xayuubiyaan madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir oo soddon sano talada hayay.
Haddaba halkan waxaan ku soo koobaynaa qaar ka mid ah shaqsiyaadkii iyo xisbiyadii kaalinta muhiimka ah ka qaatay isbadalka Suudaan ka dhacay.
Isutagga Xirfadleyaasha Suudaan
Dalladan ayaa ahayd middii ugu baaxadwaynyd ee isku dubba ridda mudaaharaadyadii dawladda lagu diidanaa.
Isutagga Xirfadleyaasha Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SPA xubnahooda ugu badan waa dadka magaalooyinka ku nool ee aqoonyahanka ah, waxaana laga xusi karaa dhakhaatiir, bareyaasha jaamacadaha iyo garyaqaanno.
Ururrada la magacaabi karo ee dalladan ku midoobay waxaa ka mid ah Ururka iskuxirka saxafiyiinta Suudaan, Guddiga dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan iyo Dalladda qareennana dimuqraadiga ah.
Ciwaan ay Twitterka ka samaysteen ayay daladda SPA ku shaaciyeen 1 Janaayo in "sida ugu dhakhso badan uu xilka u banneeyo Cumar Xasan Al Bashiir.
Xubnaha SPA ayaa ahmiyad wayn siiyay in ay baraha bulshada dadka kula wadaagaan kolba waxa ka soo kordha mudaaharaadyada.
Dallada NFC ayaa isu keentay 22 xisbi siyaasadeed, waxayna kulmisay xisbiyada ay mabaa'diidoodu Islaamnimada ku qotonto, ku waas oo mar aad ugu dhawaa Bashiir.
Waxaa ka mid ah Akhwaanul Muslimiin iyo Reform Now Party oo uu hoggaamiyo Ghazi Salahuddin al-Atabani.
Labadii bishii Janaayo ayay daladdani ku dhawaaqday in ay taageersan tahay mudaaharaadeyaasha waxayna Bashiir ugu baaqeen in uu xilka banneeyo.
Waxay ku baaqeen in uu si nabad ah xilka ku banneeyo kuna wareejiyo Guddi ay u bixiyeen Guddiga Madaxa bannaan.
Imaam Saadiq Al Mahdi
Ninkan mucaaradka ah ee caanka ah ayaa horay u soo noqday Ra'iisulwasaare wuxuuna hadda hoggaamiyaa xisbiga mucaaradka ah ee Sudan Call.
Wuxuu sidoo kale hoggaamiyaa National Umma Party wuxuuna imaam ka yahay dariiqada Suufiyada ee Ansar.
Saadiq oo 84 jir ah ayaa wax ku soo bartay jaamacadda Oxford University, wuxuuna si joogto ah ugu soo dhex jiray siyaasadda tan iyo 1960-yadii, labo jeer ayuu ra'iisulwasaare soo noqtay kuwaas oo kala ahaa 1966 -1967 iyo markii labaad oo uu ku soo noqday 1986 -1989.
Dawladda ayaa Saadiq ku eedaysay inuu doonayo in uu mudaaharaadyada u adeegsado in uu awoodda ku maroorsado.
Inkastoo ay eedo u jeedisay haddana dawladdu waxay ka gaabsatay in ay xabsi dhigto Saadiq, waxaana macquul ah in ay rabtay in ay kala qaybiso xisbiga Sudan Call.
Saadiq wuxuu sheegay in ujeedadiisu ay tahay in uu Suudaan ku hago jiho kale.
Ghazi Saladin Atabani Ghazi
Ghazi Saladin Atabani oo caan ku ah Salah al-Din Attabani ah nin ku caan baxay siyaasadda iyo dhakhtarnimo. Wuxuu horay u soo noqday lataliye madaxweyne wuxuuna ka mid ahaa dadkii qaabeeyay inqilaabkii uu xilka kula wareegay Bashiir.
Atabani ayaa hoggaamiya xisbiga Sudan Reform Now wuxuu culuunta caafimaadka ku bartay jaamacadda Khartuum iyo UK.
Atabani ayaa si joogto ah ugu jiray siyaasaddaha diinta salka ku haya ee Suudaan, mar ayuuna ahaa xulafo aad ugu dhaw Bashiir laga billaabo 1991, wuxuuna hoggaamiyay kooxdii dawladda ka socotay ee gashay wadaxaajoodkii madaxbannaanida Suudaanta Koonfureed.
Fadil al-Mahdi ayaa hoggaamiya Xisbiga Umma Reform kaas oo ka go'ay xisbiga Saadiq Al Mahdi ee National Ummah.
Culuunta siyaasadda ayuu ku soo bartay Britain iyo Jarmalka.
Mar ayuu la taliye u soo noqday Cumar Xasan Al Bashiir.
Alaa Salah oo ah gabadhii sawirkeedu caanka baxay
Alaa Salah oo ah gabadh reer Suudaan ayaa ka mid noqday dadka horkacaya dibadbaxyada galaaftay madaxweynihii Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir.
Waxaa baraha bulshada qabsaday Alaa oo qaadaysa hees lagu tageerayo kacdoonka iyada oo gaari dusha ka saaran oo dibad baxayaal badanna ay hareero taagan yihiin.
Sawir wakhtigaas laga qaaday ayaana astaan u noqday kacdoonka maalmihii u dambeeyay.